Starbucks Oo Bilaabay Shabakad Bulsho | Martech Zone
Starbucks Bilaabida Shabakada Bulshada
Khamiis, Maarso 20, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Fikradeyda Starbucks wali ma taagna waa kacday! Sameynta shabakad bulsheed si aad uga codsato jawaab celin macaamiisha si toos ah dukaamada ay ilaalinayaan ma noqon karto fikrad xun. Haddii ay jiraan nooc tafaariiq ah oo run ahaantii ku guuleysan kara isku xirka bulshada, Starbucks ayaa si fiican u noqon kara. Waa summad aad u weyn, waa meel walba, dadku waa la qabatimay (macno ahaan) alaabtooda, macaamiishana way jecel yihiin.
Starbucks dhab ahaantii waxay ka soo horjeedaan derbi. Waxay lumiyeen xiisihii ay u qabeen taageerayaashooda, qarashka ku baxa howlaha ayaa kor u kacay, baristasyada waaweyn way ku sii adkaanaysaa helitaankooda, kharashka macaamiisha wuu sii xumaanayaa, tartamayaasha sida McDonalds waxay bilaabeen inay kor u kacaan luminta macaamiisha quraacda. McDonalds xitaa wuu sarreeyay Starbucks madaxa ilaa madaxa tijaabada dhadhanka.
Maxaan u joogin Starbucks sida badan
Shakhsiyan, waxaan booqdaa Starbucks kalabar intii aan ahaan jiray. Waan ku raaxeystaa rootiga caymiska ee aan ka helo gurigayga kafee ee maxalliga ah waana ku qanacsanahay xaqiiqda ah in lacagtayda ay dib ugu laabaneyso dhaqaalaha maxalliga ah. Starbucks waxay lumisay dhalaalkeedii markii aan bilaabay inaan arko iyaga oo dhawr dariiqo ah marka laga reebo midba midka kale iyo wireless-ka ayaa igu kacaya $ 30 bishiiba. Kaliya waxaan joogaa Starbucks markii aan Kafee Greenwood, Koobka Bean waa meel aan la gaari karin.
Iyadoo Howard Schultz dib ugu noqo kursiga darawalka, laga yaabee Starbucks inay istaagi karto fursad. Waan arki doonaa. Malahayga waxa weeye in Shabakada Bulshadu yeelan doonto qulqulka taraafikada, waxaan dooran lahaa baloog waxaanan waydiisan lahaa ra'yi-celin ku saabsan waxyaabaha aan yara bartilmaameedsan karo.
Maxay fikradeyda noqon doontaa Starbucks? Kuraas raaxo leh.
Qaxwaha qaawan ee aadan u baahnayn inaad takhtar ku sameysid nus shey oo ah waxyaabaha caanaha laga sameeyo si aad u hargato waxay noqon laheyd fikradeyda Starbucks.
Pint, dabcan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaan baran doonaa dib u akhrinta ka hor intaanan riixin.
Waxaan joojiyay inaan cabo Starbucks markii baristas ay joojiyeen inay kor kuu soo eegaan markaad amarkaaga qaadaneysay oo aad dib u siineysay isbedelka. Waxba kama garaacaan adeegga macaamiisha heer caalami ah, Starbucks-na si dhab ah ayaa uga maqan. Ma isweydiineysaa haddii tababarkaas nuska nuska ah uu wax taray ??
Starbucks waxay noqotay McDonalds kafee, sidaan qabo. Sida ku xusan Eric ee kor ku xusan, adeegga macaamiisha dhab ahaantii hoos ayuu u dhacay. Shaqaaluhu guud ahaan waxay umuuqdaan kuwa aan danaynayn sida ay ugu shaqeeyaan meelo badan oo cunto-dhakhso ah, tayada wax soo saarkuna waa mid aan iswaafaqsanayn (inkasta oo aan dhihi lahaa McDonalds waa wax aad uqurux badan, maahan inaan halkaas wax ku cuno inta badan mar dambe). Waxay qaateen shay hore u lahaa kayd gaar ah oo caadi ka dhigtay.
Difaacooda, ma hubo sida loo maleynayo inaad ku ilaalineyso faa'iidooyinka faa'iidada leh ee suuq weyn sida tartanka sida kafeega maalmahan. Waxaan u maleynayaa in bustaha adduunka oo leh dukaamada Starbucks ay khasaaro ku imaaneyso tayada guud ee khibrada aad heleyso markaad booqato, laakiin waa nasiib darro. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko iyagoo wax hagaajinaya, laakiin waxaan qabaa inay culays ku hayaan gacmahooda.
Ma aqaano haddii Starbucks uu u baahan yahay shabakad bulsheed wax ka badan inta Bode Miller u baahan tahay inuu sii daayo shabakadda bulshada ee barafka barafka ee SkiSpace. Waa tirada badan ee isticmaaleyaasha ah ee abuuraya saameynta shabakadda isla markaana ka dhigaysa shabakad bulsheed mid qiimo leh, sidaa darteed goobaha niche si otomaatig ah ayey iskaga tooganayaan cagta. Uguyaraan, IMHO 😉
Waxaan u maleynayaa inaan kugu raacsanahay, Dave. 'Muddada gaaban', waxay umuuqataa inay kaliya codsanayaan jawaab celin runtiina maahan 'shabakad bulsheed' dareenka caadiga ah. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii ay hirgelinayaan 2-da sare - kuraasta bilaa wireless & kuwa raaxada leh
Labaduba waxay ilaaliyaan macaamiisha muddo dheer longer wax aan ahayn in qaxwaha wax soo saar badan laga helo. Wax badan ma iibinaysid marka meel la fadhiisto la waayo!
Tan waan aragnaa markasta miyaanay ahayn? Fikrad aad u fiican, wax soo saar horumarineed iyo shirkad, miisaan si looga faa'iideysto sumad kulul… ka dibna wuxuu bilaabaa inuu u sii fido sidii waali oo kale oo lagu daro alaabooyinka iyo goobaha lagu daro oo uu bilaabo inuu lumiyo xuddunta.
Weli waan joogaa Starbucks maalin kasta laakiin waxay lumisay wax badan oo rafcaan ah intii aan socday. Waxaan jecelahay in Shultz uu dib ugu soo laabto hogaminta… xasuusinaysa shaqooyinka ku soo noqonaya Apple… waa inay dib ugu soo celisaa iyaga si ay u siiyaan khibrad qabow. Xidhiidhka warbaahinta bulshada ayaa ugu yaraan albaabada u furaya qaab cusub.
Fikradayda iyaga ayaa ah inay si taxaddar leh u dhageysato sababaha ay macaamiisha hadda jira aysan u imaanaynin, kuwa kalena ay u aadayaan McDonalds iyo sababta ay dadku u arkaan inay aad u dhib badan tahay in xitaa la tixgeliyo. Hal shay oo aan meesha ka saari lahaa ayaa ah inay joojiyaan niikada iyo yaraynta khibrada. Waan ku raacsanahay isku xirnaanta wireless-ka. Sikastaba, jawaabihii ayaa banaanka yaala. Summad aad u xoog badan ayaa iyaga u ah iyaga oo aan helin waddo ay ku saxaan.
Waan ku raacsanahay Phil. Waxaan la yaabanahay inta lumay si fudud maxaa yeelay Starbucks ma laha 'urka baabuurka cusub'?
Ku noqoshada isbeddelku waa aasaas aad u jajaban oo lagu dhiso ganacsigaaga waxayna u egtahay in ay mugdi gelinayso aragtida shirkadeed ee nafteeda iyo muhiimadda ay leedahay. Waxaan u maleynayaa in inta badan guusha Starbuck ay aheyd isbedelka cabitaanka qabow oo ereyo badan lagu galiyay qiimo qaali ah.
Haa, xiisaha gaadhiga cusub ayaa guntay. Waxaan xasuustaa markay dadku igu qosli jireen joojinta iyo adeegsiga luuqadaas qalaad ee cusub ee aan bartay.
Waxaad u badan tahay inaad ku dhufatay arinta muhiimka u ah iyaga… fadlan ama bilow weyn oo ku saabsan lahaanshaha 'khibrada subaxnimo' ee lumisay jidkeedii. Waqtiga ayaa sheegi doona.
In kasta oo aan sidoo kale ku amaano Starbucks abuurista nidaam macaamiisha u keenaya geedi socodkooda hal-abuurnimo, waxa kale oo jira hoos u dhac aanad sheegin. Tartamayaasha, oo ka bilaabma Peet ilaa dukaanka kafeega geeska godka-dahaarka ah, ayaa sidoo kale marin u yeelan kara wadahadalka hal-abuurka Starbucks. Tani waa hanti urursi u ah waxa macaamiisha ay raadinayaan, waxa la isku dayay, iyo waxa shaqeynaya ama shaqeynaya. Si kor loogu qaado, Starbucks waxay qabataa shaqo weyn oo isdhexgal ah, taas oo keeneysa cilmi baaris badan oo suuqa xorta ah.
Weli waan ku qanacsanahay waxa uu sameeyay Starbucks, laakiin haddii aan saacad yar ahaan lahaa waxaan sidoo kale daadin lahaa gudiyada soo jeedinta maalin kasta!
Inbadan oo ku saabsan mowduucan gaarka ah marka laga eego aragtida heer sare ee ganacsiga: